कसरी फोन मार्फत "Tele2" सबै सदस्यता असक्षम?
समय समयमा "Tele2" सहित मोबाइल अपरेटरहरु, आफ्नो खाताबाट कटौती अज्ञात समस्या सामना को ग्राहकहरु। अक्सर यो कारण कोठा जोडिएको छन् सबै सदस्यता छन्। आफ्नो जडान सदस्य वा मोबाइल अपरेटर द्वारा गर्छ - सधैं सम्भव निश्चितताका साथ भन्न छ। बारेमा अनावश्यक डाटा प्याकेटहरू र कसरी "Tele2" सबै सदस्यता बन्द गर्न को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी, हामी यस लेखमा विस्तृत वर्णन।
मनोरंजन सामग्री के हो र यसलाई कसरी जडान गर्न सकिँदैन?
अन्तर्गत सदस्यता संख्या मौका संग नियमित एक शुल्क लागि एक निश्चित वर्ण (जस्तै, Jokes, समाचार, +18, सदस्य, विभिन्न प्रस्ताव र यति मा।) को जानकारी प्राप्त गर्न दैनिक हुन सक्छ यस्तो प्याकेजहरू लागि जडान छन्, र प्रदान ग्राहकहरु (सदस्यता शुल्क अतिरिक्त सेवाहरू बुझाउँछ, मासिक वा मनपरी)।
जडान यस्तो सामग्री मेलिंग सुरु गर्न सकिँदैन प्रयोगकर्ता द्वारा या त, र सदस्यहरू लागि योजना सेवा कल भित्र ग्राहक सेवा को विशेषज्ञहरु। अनधिकृत जडान गरेको छ:
एक टेलिफोन किप्याड मा प्रतीक को एक विशिष्ट संयोजन प्रविष्ट गरेर;
तपाईं इन्टरनेटमा फोन नम्बर निर्दिष्ट गर्दा एक पोर्टल मा, जस्तै सेवाहरू प्रदान (प्रयोगकर्ता देख्नुहुन्छ सधैं भन्ने सदस्यता सक्रियता बारेमा शुल्क लागि बाहिर छैन छ)।
को "Tele2" आफ्नै सबै सदस्यता कसरी असक्षम
त्यहाँ सक्छन् सदस्य, जो आफै यो सेवा, सक्रिय छ व्यक्तिगत तिनीहरूलाई छुटकारा प्राप्त कि एक निष्पक्ष प्रश्न छ? म मेरो खाता कटौती रोक्न ग्राहक सेवा व्यवसायीक सम्पर्क गर्नुपर्छ? जवाफ प्रयोगकर्ता सदस्यता कस्तो थाह छ कि छैन भनेर निर्भर हुनेछ, उहाँले आफ्नो कोठा सम्म मुग्ध।
सक्रियता नगरिएका थियो र केही सेवाहरू ग्राहक को अस्तित्व सिकेका भने मात्र सन्तुलन कम पछि, सन्दर्भ "Tele2" कम्पनीको ग्राहक सेवा विशेषज्ञहरु अपरिहार्य हुनेछ।
जडित सेवाहरू / प्याकेजहरू / सदस्यता को सूची जाँच
ठ्याक्कै खाता पैसा को लापता को कारण थियो के निर्धारण गर्न, तपाईं नम्बर मा जानकारी समीक्षा र यदि कुनै पनि अतिरिक्त विकल्प सक्रिय छन् हेर्नुपर्छ। धेरै तरिकामा यो जानकारी जाँच गर्नुहोस्:
व्यक्तिगत खातामा टेलिफोन नम्बर प्रयोग गरेर, (मोबाइल अपरेटर मोबाइल अनुप्रयोगको आधिकारिक वेबसाइट वा माध्यम) गएर इन्टरनेट मार्फत;
मार्फत सम्पर्क केन्द्र "Tele2" (वर्तमान सदस्यताका लागि समर्थन कलको लागि एक नम्बर प्रदान गर्दछ - 611; यो, तपाईं स्वचालित informant सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ विशेषज्ञ जवाफ प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छैन);
प्रविष्ट गरेर विशिष्ट आदेशहरू 153 # * र * 144 * #6(यस मामला मा, मोबाइल उपकरणको पर्दामा प्रदर्शित जानकारी)।
सेवाहरूको सूची को परीक्षा कि लागि थप विकल्पहरू पैसा चार्ज गर्न सकिएन पहिचान गर्न सक्षम छ भने, कसरी "Tele2" सबै सदस्यता बन्द गर्न को प्रश्नको आफ्नै उत्तर सफल छैन। तथापि, तपाईं त्यहाँ शेष परिवर्तन थियो किन कारण निर्धारण गर्न सक्छन् जो, (सबै अवधि खाता बाट कटौती गर्दै धन विवरण कागजात) विवरण आदेश गर्न सक्नुहुन्छ।
चेतावनी! सेवा स्वागत विवरण भुक्तानी भएको छ।
जब तपाईं व्यावसायिक सहायता चाहिन्छ?
स्वतन्त्र हुन सक्दैन सदस्यता को उपस्थिति र पैसा को खाता बाट लेख्ने-बन्द स्थिति स्पष्ट भने, यो फोन नम्बर मा जानकारी हेर्न एक विशेषज्ञ ग्राहक सेवा वा कार्यालय कर्मचारी आकर्षित गर्न पूर्ण उचित हुनेछ। मद्दत सकेसम्म चाँडै अर्थमा बनाउँछ खोज्छन्।
विशेषज्ञ संख्या मा जानकारी समीक्षा र सबै सदस्यता "Tele2" बन्द कसरी खोल्न तपाईं भन्नेछु। केही अवस्थामा मा, घृणा सेवाहरूको निष्क्रियकरण मात्र एक अपरेटर उत्पादन गर्न सक्छन्।
का कसरी बन्द तुरुन्तै स्वतन्त्र भएको "Tele2" सबै सदस्यता बारी हेरौं। कार्यहरू एक विशिष्ट अनुक्रम को माध्यम द्वारा थप सेवाहरू जडान (आगत प्रतीक संयोजन, एक वेबसाइट को रूप मा नम्बर, र यति मा।)। यसरी, यो प्रत्येक सदस्यता र केही संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरू निष्क्रिय गरिँदै लागि जस्तो देखिन्छ। यो कसरी "Tele2" एक सबै सदस्यता बन्द गर्न को प्रश्न, छैन सम्पूर्ण सही टोली छ भन्ने हो। जवाफ यो पनि ग्राहक सेवा विशेषज्ञ गर्न सक्छन्। तल भुक्तानी मेलिंग असक्षम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ कि आदेशहरू सूची छ:
* 144 * 1 # - "तपाईं साक्षी छन्।"
"छेपारो" - * 110 * 20 #।
बन्द वितरण, Horoscope समावेश दैनिक सन्देशहरू प्राप्त तीन-अंकको नम्बर 396 संग मोबाइल अनुप्रयोग वा विशेषज्ञ सम्पर्क केन्द्र मार्फत "मेरो सामग्री" मात्र सम्भव छ जब (जो कल 611 सक्नुहुन्छ कल)।
अब कसरी बन्द सबै सदस्यता "Tele2" गर्न फोन मार्फत, जो मा मोबाइल अनुप्रयोग खोल्न पत्ता। हामी के गर्न आवश्यक छ? मोबाइल उपकरणमा स्थापित जडान सेवाहरू हेर्न मात्र होइन, तर पनि तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न "Tele2" कम्पनी सरकारी आवेदन प्रयोग गर्न सकिन्छ। केही सदस्यता पनि यो सूचीमा देखा पर्न सक्छन्। जडान वा निर्मूल प्याकेजहरू वा सेवाहरूको उपयोग एकदम सरल छ, बस प्रोम्प्टहरूको आवेदन पालना गर्नुहोस्। यो विधि कम्पनी को विभाग एक यात्रा जोगिन वा सम्पर्क केन्द्र कल हुनेछ। उपकरणहरू (PlayMarket, AppStore, आदि) को लागि भण्डारबाट मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्। यसको स्थापना र प्रयोग मुक्त छन्।
के सेवाहरू "Tele2" ग्राहकहरु उपयोगी हुन सक्छ
एक पटक कसरी "Tele2" सबै सदस्यता बन्द गर्न को प्रश्न ड्रप, तपाईं लाभ को एक नम्बर थप्नेछ भन्ने साँच्चै उपयोगी सेवा कसरी जडान गर्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तिनीहरूलाई केही एक संक्षिप्त विवरण छ।
सम्मेलन कल। सेवा, धेरै मान्छे संग कुराकानी गर्न आवश्यक छ जसले व्यापार मान्छे संग लोकप्रिय हुने। यो शुल्क को पूर्ण निःशुल्क प्रदान गरिएको छ र प्रयोगकर्ता द्वारा manipulated गर्न सकिन्छ। आफ्नो फोन अन गर्न तपाईंले निम्न अनुक्रम डायल गर्न आवश्यक: * 107 *4*4* 1 # विच्छेद गर्न - गर्न "2" आदेश को अन्त्यमा एकाइ प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। मार्फत व्यावसायिक यो सेवा व्यवस्थापन ग्राहक सेवा हुन सक्छ।
एसएमएस र एमएमएस सन्देशहरू जानकारी प्राप्त गर्न इन्कार। अर्को विकल्प, विभिन्न जानकारी-मेलिंग को थकित निम्ति रोचक हुन सक्छ जो। यो पनि प्रयोगकर्ता नियन्त्रित छ। यसको सक्रियता मोबाइल आवेदन र व्यक्तिगत खाता, व्यावसायिक ग्राहक सेवा मार्फत साथै सम्भव छ।
अर्डर कसरी फोन गर्न "Tele2" सबै सदस्यता बन्द गर्न सोच्न छैन, तपाईंले यस्तै सेवाहरू प्रस्ताव गर्ने उपकरणमा प्राप्त सबै सन्देशहरू, र पोर्टल गर्न ध्यान हुनुपर्छ। लापरवाह नम्बर प्रविष्टि खाता बाट नियमित लेख्ने-बन्द धन सक्छ। असक्षम सदस्यता एउटा समस्या अनिश्चितकालीन पछिल्लो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि कोठा जोडिएको जुन सेवा र सदस्यता, को दायरा समय समयमा जाँच गर्नुपर्छ। यो गर्न, त्यहाँ सुविधाजनक तरिका र उपकरण, मोबाइल आवेदन देखि लिएर र एक विशेषज्ञ संग मिश्रित अगाडि नम्बर 611 मा एक कल मा ग्राहकहरु उपलब्ध छ जो एक answerphone, संग समाप्त को एक नम्बर हो। खाता उपलब्ध धन नियन्त्रण खेती आफ्नो सुविधाजनक बाटो चयन गर्नुहोस्।
सेवा "दोस्रो लाइन" गर्न "टन": जडान गर्न कसरी
मडुलन - एक ... पल्स चौडाई मडुलन
आफ्नो फोन को लागि प्रवर्धक नेटवर्क कभरेज: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
कसरी "बीलाईन" रोमिङ सक्षम? , लागत सल्लाह: रोमिङ जडान रूस ( "बीलाईन") मा
किन सपना सेक्स सपना? सपना पुस्तक मूल्य कामुक सपना व्याख्या
"Clarens" (काजल): समीक्षा
उपनगरहरुमा GTA समूह: आपराधिक गतिविधि को हदसम्म
विटामिन प्रानेटल - प्रयोगको लागि निर्देशन
मुख्य earthing सिस्टम
जहाज "मिखाइल Sholokhov": फोटो र समीक्षा
एक वसन्त, एक पानी पार्क: विवरण र मूल्यहरू
अनिता Lutsenko वजन लागि प्रभावकारी व्यायाम प्रदान गर्दछ
सामूहिक बनाम एकल? शार्कहरू डल्फिनबाट किन डराउँछन्?